I-Darktable 3.6 ifika kunye nokuphuculwa okukhulu, iimodyuli ezintsha kunye nokunye | Ubunlog
I-Darktable 3.6 ifika kunye nophuculo olukhulu, iimodyuli ezintsha kunye nokunye
Ubumnyama | 12/07/2021 14:58 | Ukuhlaziywa ukuba 12/07/2021 20:03 | software
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo ukukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-Darktable 3.6 kwabhengezwa, apho ukongeza kwimisebenzi emitsha nephuculweyo ibonelela ngentuthuzelo enkulu ekusebenzeni kunye nemodyuli yokungenisa ehlaziyiweyo, kunye nenjini entsha ekrwada ekufanele ukuba inike iziphumo ezilungileyo kakhulu ngesantya esiphezulu nangaphezulu.
Kulabo abangaqhelekanga nge-Darktable, kuya kufuneka uyazi loo nto oku kusebenza njengenye indlela yasimahla kwiAdobe Lightroom kwaye igxile ekusetyenzisweni okungonakalisiyo kwemifanekiso eluhlaza.
1 Malunga nobumnyama
2 Iindaba eziphambili kwi-Darktable 3.6
3 Uyifaka njani i-Darktable kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Mnyama inika ukhetho olukhulu lweemodyuli zokwenza zonke iintlobo zemisebenzi yokwenza iifoto, ikuvumela ukuba ugcine isiseko semifanekiso, ukhangele ngokubonakalayo imifanekiso esele ikhona kwaye, ukuba kukho imfuneko, wenze ukulungiswa kokugqwetha kunye nokuphucula umgangatho, ngelixa ugcina umfanekiso wokuqala kunye nayo yonke imbali yokusebenza kwayo. Ikhowudi yeprojekthi ihanjiswa phantsi kwelayisenisi yeGPLv3. Imigqomo elindelweyo kulindeleke kwixa elizayo.
Iindaba eziphambili kwi-Darktable 3.6
Kule nguqulo ikhutshiweyo emnyama ye-Darktable 3.6 abaphuhlisi babala malunga neziqinisekiso ezingama-2680 ye-Darktable kunye neRawspeed ukusukela kuguqulelo 3.4, kunye Izicelo ezingama-954 zokutsala ziqhubekisiwe kwaye imiba engama-290 isonjululwe, Ngayo se yenze ulungelelwaniso oluninzi ngaphakathi kuyo yonke ikhowudi kunye uninzi lokuphucula isantya sendlela yekhowudi ICPU ukulungelelanisa umgangatho ikhowudi ye-OpenMP, njengoko kukho iinzuzo ezinkulu ngekhowudi entsha kwiimodyuli ezithile.
Ngenxalenye yezinto ezinqabileyo ezinikwe kule nguqulo intsha yi ukongezwa kwepaneli yokufikelela ngokukhawuleza eya kuthatha indawo yemodyuli 'esisiseko'»Ekhoyo kwaye yongeza ukusebenza ngakumbi njengoko uyilo olutsha luzisa ujongano oluhlaziyiweyo kwiimodyuli zokuqhubekeka ezikhoyo kwaye uziqokelela kuyilo olunye olumanyeneyo.
ngaphandle koko abasebenzisi baya kuba nakho ukongeza ulawulo nakweyiphi na imodyuli yesicelo kwiPaneli yokuNgena ngokuKhawulezayo entsha kwaye bayenze ngokwezifiso ukuthanda kwakho yintoni ithemba elimnyama elinokukunceda wandise imveliso. Inkampani ithi ngolu hlaziyo, iimodyuli zinokongezwa okanye zisuswe kwiqela elikwiwindow yolondolozo, kwaye amandla okufaka ngokuzenzekelayo iimodyuli zeqela lemodyuli longeziwe.
Olunye lolona tshintsho lubonakalayo imodyuli entsha yokungenisa ngoku ibonisa izithonjana zemifanekiso ngaphambi kokungenisa ngaphakathi kwaye yenza kube lula ukuphatha imisebenzi eyahlukeneyo yokungenisa. Incoko yababini ngoku isetyenziselwa ukungenisa iidiski, iimemori khadi, okanye iikhamera.
Kwelinye icala, kuyaphawulwa ukuba le nguqulo intsha ineicandelo elitsha elongezwe kwimodyuli yokuLungiswa kweMibala evumela abasebenzisi ukuba basebenzise itshathi yokujonga umbala kunye nomda wevektha wongezwe "ukuxhasa i-histogram yangoku, ifomathi yamaza, kunye neembono zeparade."
I-algorithm emitsha esemgangathweni esemgangathweni esemgangathweni ongcono.
Imodyuli entsha ye-RGB yokulinganisa umbala ngoku ihlangabezana nazo zonke iimfuno zokulungiswa kombala.
Imodyuli yokunyanzeliswa kweepikseli elula / ukufiphala kwamalungu omfanekiso ngeenjongo zokuthintela.
Amandla okwenza kunye nokubonisa imaski yokukhanya esekwe kwiinkcukacha okanye ubukhali bomfanekiso. Ubumnyama buthetha ukuba umsebenzi usebenzisa ialgorithm efanayo naleyo isetyenziswe kwimisebenzi emibini yedemo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, imodyuli entsha yokusikwa kweempawu ezintsha.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo yale nguqulo intsha ye-Darktable 3.6, unokujonga isimemezelo sokuqala Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-Darktable kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo banomdla wokukwazi ukufaka le nguqulo intsha, kufuneka bazi ukuba okwangoku i-binaries esele igqityiwe ye-Ubuntu kunye neziphumo zayo azikafumaneki okwangoku, nangona ingumcimbi weentsuku ngaphambi kokuba zifumaneke ngaphakathi koovimba.
Ukufakela kwindawo yokugcina izinto, chwetheza nje:
Ngelixa kwabo sele befuna ukuzama le nguqulo intsha, banokwenza isicelo ngendlela elandelayo. Kuqala sifumana ikhowudi yemvelaphi nge:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-Darktable 3.6 ifika kunye nophuculo olukhulu, iimodyuli ezintsha kunye nokunye
IFirefox 90 iza nezisombululo zokuhambelana kweqela lesithathu, iSmartBlock V2 kunye nokunye
I-Linux 5.14-rc1 iza neziphuculo ezininzi ze-GPU kunye ne-latency esezantsi kumqhubi we-USB